M/weyne Donald Trump oo aqbalay inuu la kulmo Kim Jong-un+Trump malaga yaabaa inuu la heshiiyo Kim Jong? | M/weyne Donald Trump oo aqbalay inuu la kulmo Kim Jong-un+Trump malaga yaabaa inuu la heshiiyo Kim Jong? | Hal Sheegaha La Hubo
M/weyne Donald Trump oo aqbalay inuu la kulmo Kim Jong-un+Trump malaga yaabaa inuu la heshiiyo Kim Jong?
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa aqbalay in uu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, taas oo ah wax aanan la filanaynin.
Dadka siyaasada u dhuun duleela ayaa sheegay in horumarkan cusub ee soo kordhay ay ka dhalatay sanado badan oo dadaalo dublamaasiyadeed, islamarkaasna aysan ahayn arrin si sahlan ku dhacday.
Trump ayaa sheegay in waxa dhacay ay yihiin horumar weyn oo soo kordhay, balse waxa uu sheegay in cunaqabataynta ay sii jiri doonto.
Kuuriyada Waqooyi wali wax war ah kama aysan soo saarin.
Dalkan ayaa muddo aad u dheer go’doon ka ahaa adduunka intiisa kale sababtuna tahay ku xad gudub xuquuqda aadanaha ah oo caddeymo badan laga hayo iyo horumarinta barnaamijka hubka nuyuukleerka.
Labada nin oo bilihii lasoo dhaafay hawada isu mariyay hadalo kulkulul ayaa laga wardhawri doonaa kulankood oo noqoya kii ugu horeeyay oo dhexmara labo hoggaamiye oo Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ka kala socda.
Lama oga meel ay ku kulmayaan, balse waxaa loo malaynayaa in kulanka uu ka dhici karo aagga militariga ka caaggan ee u dhaxeeya labada Kuuriya, ama Shiinaha.